संसद पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्री नबन्ने प्रचण्डको खुलासा – rastriyakhabar.com
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेकपा (प्रचण्ड-माधव समूह) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ नभएको बताउँदै आएका छन् । यसैसाता गृहजिल्ला चितवनमा पुगेर पनि उनले प्रधानमन्त्रीको लोभ नभएको बताए । के अब संसद पुनस्थापना भयो भने प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दैनन् त ?
शनिबार अनलाइनखबरले प्रचण्डसँग यसबारे थप स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दा उनले संसद पुनस्थापनापछि प्रतिपक्षी दललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनु उचित हुने प्रष्ट्याए । ‘हामीभित्रबाट भन्दा पनि अब अरु प्रतिपक्षबाट होस् । किनभने, हामी त सत्तामा बसेका भयौं नि । अहिले पो पार्टी फुट्यो त । हामी त सत्तामा बसेर सफल नभएकाभित्र पर्‍यौं नि त’ प्रचण्डले भने, ‘बरु प्रतिपक्षलाई दिएर हामी पनि त्यहाँ सहभागी भयो भने हुन्छ कि भन्ने मान्यता राखेर भनेको हो मैले ।’
आफू वा आफ्नो दलबाट भन्दा प्रतिपक्षबाट प्रधानमन्त्री बनेमा जनतामा पनि उचित सन्देश जाने र अन्तरािष्ट्रय सम्बन्ध पनि राम्रो हुने प्रचण्डको विश्लेषण छ ।
उनले अगाडि भने, ‘तपाईले सिधा बुझ्दा हुन्छ, त्यसो गर्दाखेरि जनतालाई पनि ठीकै हुन्छ भन्ने पर्ने, देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि हुने, हाम्रा छिमेकी र अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरुसँग सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउन पनि सकिने कारणहरुले गर्दा मैले यो भनेको हुँँ ।’
संसद पुनस्थापनापछि आन्दोलनरत दलबाटै सरकारको नेतृत्व हुने प्रचण्डले बताए । उनी भन्छन्, ‘अब संसद पुनस्थापना भइसकेपछि राष्ट्रिय सरकार वा संयुक्त सरकारमै जान्छ । त्यसरी हेर्दा, नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टीको वीचमा सहकार्यको सम्भावना नै अहिलेलाई प्रत्यक्ष देखिएको छ ।’
प्रचण्डले थपे, ‘केपी ओलीको संविधानविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी कदमका विरुद्ध जो सडकमा छन्, तिनै राजनीतिक दलबाट नै नेतृत्व हुने हो । त्यसमा लागेका नेताहरु नै नेतृत्वमा आउने हो । प्रधानमन्त्री हुने त्यहीँभित्रबाट हो ।’
ओलीको समर्थन गर्नेहरुका तर्फबाट भने प्रधानमन्त्री बन्ने केपी ओलीबाहेक अरु नभएको प्रचण्डले बताए । उनले भने, ‘केपीको समर्थन गर्नेबाट त अर्को प्रधानमन्त्री हुने कुरा भएन, केपी नै छँदैछन् ।’
संसद पुनःस्थापना हुनेमा प्रचण्ड ढुक्क देखिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘अब सर्वोच्चले फैसला सुनाउन मात्रै बाँकी देख्छु । पुनःस्थापनाको विकल्प छैन भनेर फैसला सुनाउँछ भन्ने नै देख्छु जताबाट पनि ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले पुस ५ यता केपी ओली पूर्णरुपमा असफल भइसकेको दाबी गरे । अब छिमेकी भारतले समेत ओलीको असंवैधानिक कदमलाई समर्थन नगर्ने उनले दाबी गरे ।
प्रचण्डले अगाडि भने, ‘उहाँ (केपी ओली) अन्तराष्ट्रिय शक्तिले मलाई साथ दिन्छन् भन्ने भ्रममा पर्नुभयो कि भन्ने लाग्छ । दुई/चार महिनायताको आवत-जावत बस उठ हेर्दा कहीँ त्यस्तो हो कि भन्ने त लाग्छ । तर, म के ठान्छु भने हाम्रा छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् ।…. अन्ततः ती शक्तिहरू पनि नेपाली जनमतभन्दा बाहिर जान सक्छन् भन्ने लाग्दैन । विगतका अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ ।’
सोमवार, फाल्गुन १०, २०७७ मा प्रकाशित